सनस्क्रिन कि सनब्लक : यी बीच के भिन्नता छ र कुनको प्रयोग बढी प्रभावकारी ? | Ratopati
सनस्क्रिन कि सनब्लक : यी बीच के भिन्नता छ र कुनको प्रयोग बढी प्रभावकारी ?
गर्मीको मौसम छ र यस्तो अवस्थामा धेरै मानिसहरूलाई घाममा बाहिर निस्कनु धेरै चुनौतीपूर्ण लाग्न सक्छ किनभने सूर्यको हानिकारक किरणले तपाईंको छालालाई धेरै हानी पुर्याउँछ । विज्ञहरुले घरबाट बाहिर निस्कँदा वा घरमै बस्दा पनि छालामा सनस्क्रिन वा सनब्लक लगाउन सुझाव दिन्छन् । सूर्यको कडा किरणले गर्दा छाला डढ्ने र छालासम्बन्धि अन्य समस्या देखा पर्नसक्छ ।
घाममा बाहिर निस्कँदा मानिसहरुलाई सनस्क्रिन लगाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ कि सनब्लक भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन । यी दुईबीच भिन्नता छ भन्नेबारे पनि धेरैलाई ज्ञान नहुनसक्छ ।
यसबारे थाहा पाउनका लागि ओन्ली माई हेल्थले भारतका छाला विशेषज्ञ डा. सेजल साहेता (डर्मटोलोजिस्ट–इन्योरस्किन) सँग कुराकानी गरेका छन् । यसबारे विस्तृतमा जानकारी दिइएको छ ।
सनस्क्रिन र सनब्लक बीच के भिन्नता छ ?
डा. सेजल सहेताका अनुसार सनस्क्रिन र सनब्लक लोशन दुवैले छालालाई सूर्यको हानिकारक किरणबाट छालालाई हुने क्षतिबाट जोगाउन मद्दत गर्छ ।
सनस्क्रिन छालाको लागि रासायनिक ढाल हो जसले शरीरलाई ढाक्छ । सनस्क्रिन लोशनको यो तहले छालामा पुग्नु अघि यूभी किरणहरू फिल्टर गर्ने काम गर्छ र छालालाई गम्भीर क्षति हुनबाट बचाउँछ । सनस्क्रिनमा एभोबेनजोन, अक्सिबेन्जोन र प्यारा–एमिनोबेन्जोइक एसिड (पीएबीए) एजेन्टहरू हुन्छन् ।
यस्तै, सनब्लक छालाको लागि सुरक्षा कवच जस्तै हो । जसले छालालाई अल्ट्राभोयलेट किरणबाट हुने क्षतिबाट जोगाउने काम गर्छ । सनब्लक लोशन छालाको लागि एक प्रकारको आवरण जस्तै हो जसले छालालाई हानिकारक किरणबाट बचाउनका लागि छालामा सतहमा हुने गर्छन् । सनब्लकमा साधारणतया जिंक अक्साइड वा टाइटेनियम अक्साइडजस्ता तत्व प्रयोग गरिएका हुन्छन् । जब यसलाई छालामा लगाइन्छ तब यो थोरै मोटो वा विशिष्ट महसुस हुन्छ ।
सनस्क्रिन वा सनब्लक, घामबाट छालालाई जोगाउनका लागि कुन चाहिँ फाइदाजनकः
डा. सेजल सहेताका अनुसार सनस्क्रिन र सनब्लक दुबैले छालालाई सूर्यको हानिकारक किरणबाट जोगाउन मद्दत गर्छ । दुबैले छालालाई विकिरणबाट जोगाउने काम गर्छन् । तर यी दुई मध्ये कुन राम्रो हो भनेर तुलना गर्नुपर्दा सनस्क्रिनभन्दा छालामा सनब्लकको प्रयोग बढी प्रभावकारी हुन्छ । सनब्लकले प्रभावकारी रूपमा यूभी किरणहरूलाई तपाईंको छालामा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ । यसमा धेरै चिपचिपाहट हुन्छ त्यसैले यसलाई छालामा बारम्बार लगाउन सल्लाह दिइँदैन । यसलाई थुप्रै घण्टापछि मात्रै छालामा पुनः लगाइने गरिन्छ ।
विशेषज्ञले के सुझाव दिन्छन् ?
सनस्क्रिन छालाको माध्यमबाट छालामा अवशोषित हुन्छ र यसले युभी विकिरणका साथै बुढेसकालका लक्षणहरूबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ । यो हल्का हुन्छ र छालामा राम्रोसँग सेट हुन्छ । तपाईंलाई मन परेको र आफ्नो छालाको प्रकार अनुसार दुई मध्ये एक रोज्न सक्नुहुन्छ । दुबैले तपाईंलाई सूर्यको हानिकारक किरणहरूबाट बचाउन मद्दत गर्छन् । बाहिर निस्कँदा तपाईंले योमध्ये एउटा त कुनै पनि हालतमा लगाउनुहोस् ।
विश्व थाइरोइड दिवस : थाइरोइड के हो ? के यो रोग घातक हो ?